SAWIRO: Xarunta Degmada Howl-Wadaag oo si qurux badan loo dhisay xarigana laga jaray. – Kismaayo24 News Agency
by admin 9th January 2020 0252
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u dhis balaaran ku sameeyay Xarunta Degmada Howl-wadaag oo bur bur xoogan uu kasoo gaaray qarax ismiidaamin ah oo Al Shabaab ku qaadeen 2 September ee sanadkii 2018-kii.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Caasimadda Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa xariga ka jaray dhismaha xarunta Degmada Howl-Wadaag oo dib u dhis Casri ah lagu sameeyay.
Xarunta degmada ayaa bur bur xoogan uu kasoo gaaray qaraxa, waxaana dib u dhis qurux badan ku sameeyay maamulka gobolka uu hogaaminayay Ilaah ha u naxariistee Duqii hore ee Muqdisho Eng. Yariisow oo dhintay iyada oon dhismaha xarunta la dhameyn.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dib u dhis ku sameeyay qaar kamid ah xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir oo Al Shabaab qaraxyo ku bur buriyeen, waxaana horey xariga looga jaray xarumo sidan oo kale dib u dhis loogu sameeyay.
Ciidamo ay Tababartay Dowladda UK Oo Howlgal Ka Bilaabaya Deegaano Ka Tirsan Koonfur Galbeed
Sawirro: Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada oo Dalxiis u tagay Deegaanka Goobweyn ee Duleedka Kismaayo
Tifaftiraha K24 20th March 2017
DEG DEG: Diyaaradihii imaan jiray Magaalada Muqdisho oo la hakiyay Laga bilaabo taariikhda marka ay tahay…..
Tifaftiraha K24 6th February 2017